အသံလွှင့်ဘိခြင်းဖြင့် NAB ပြရန်သတင်း, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - -, La Grange Post ကို Facility များအတွက်ဗဟိုသိုလှောင်ရေး Hub အဖြစ် JMR SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာကိုရွေးယူ NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » သတင်း » la Grange Post ကို Facility များအတွက်ဗဟိုသိုလှောင်ရေး Hub အဖြစ် JMR SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာကိုရွေးယူ
la Grange Post ကို Facility များအတွက်ဗဟိုသိုလှောင်ရေး Hub အဖြစ် JMR SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာကိုရွေးယူ
JMR အီလက်ထရောနစ်, Inc တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားအခြေပြုကြောင်းယနေ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်အရွယ်မှာသိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်၏ဦးဆောင်ပံ့ပိုးပေး la Grange Post ကို ကုမ္ပဏီ၏ရွေးကောက် BlueStorTM SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ သူတို့ရဲ့အလယ်ပိုင်းသိုလှောင်မှုအချက်အချာအဖြစ်, အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပါဝါမှ 200TB စွမ်းရည်များအတွက် JBOD တိုးချဲ့ထည့်သွင်းဖို့အပြင်၌။
2008 အတွက်၎င်း၏တံခါးများဖွင့်လှစ်ခဲ့ရာ, La Grange Post ကို, ဒစ်ဂျစ်တယ်စကားလက်ဆုံပြောဆိုမှုများနှင့်ပို့ဆောင်ထံမှအထိန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူအကြောင်းအရာကုမ္ပဏီများနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ, ဗွီဒီယို / အသံတည်းဖြတ်ရေးနှင့်အရောင်ဆုံးမခြင်းရန်, Audio / Video ပွနျလညျထူထောငျဖို့, နိုင်ငံခြားအပုဒ်ကိုက်ညီနှင့်ရုပ်ရှင်မှထောက်ပံ့ -video လွှဲပြောင်း။ ထုတ်လွှင့်အတွက်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူစက်ရုံနှင့်၎င်း၏ဖောက်သည်ဗဟိုပြုန်ထမ်းများ, ပြဇာတ်, ကော်ပိုရိတ် AV စနစ်နှင့် web-based programming ကိုလည်း bays, ပြည့်စုံကင်မရာနှင့်အလင်း packages များ, ဂရပ်ဖစ်ဖွံ့ဖြိုးရေး, မူရင်းဂီတတေးရေးနှင့်ပြည်နယ်တည်းဖြတ်လိုင်း-ချွတ်နှင့် On-line ကို 4K features -of-The-Art အသံကအဆောက်အဦ။
euroNAS OS ကိုစွမ်းအားဖြင့် 10GbE ဖိုင်ဘာ I / O ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ JMR ရဲ့ BlueStor SHARE, Mac ကိုအသုံးပြုသည်အရာ, အားလုံး, La Grange ရဲ့ပြင်ဆင်ရန် bays များအတွက်ဗဟို Drive နှင့် repository ကိုအဖြစ်ပြုမူခြင်းနှင့် လွန်စွာလိုလားသော ဆော့ဖျဝဲပလက်ဖောင်း။ စက်ရုံပိုင်ရှင် Ayal Nitzan အဆိုအရ "ကျနော်တို့မျိုးစုံ drives တွေကိုဖြတ်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရှာဖွေနေအချိန်အများကြီးသုံးစွဲမတိုင်မီ JMR SHARE NAS သိုလှောင်မှုစနစ်ကိုပေါင်းစပ်ဖို့တစျခုတည်နေရာသို့မဟုတ် GUI ကိုပြတင်းပေါက်အတွက်အရာအားလုံးကိုမြင်နိုင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ system ကိုလိုအပ်ချက်, မျိုးစုံပြင်ဆင်ရန် bays ထံမှ Workflows 4K မှတက်၏ဖတ်ပြီးသား / Write လိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့အနာဂတ်-သက်သေပြသည့်စနစ်ထည့်သွင်းကာယုံကြည်စိတ်ချရအလွန်မြင့်မားတဲ့ဘွဲ့, ပြည့်စုံသောလုပ်ဆောင်ချက်ကို, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ client ကိုထောက်ခံကြောင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းမှာရှိသည်။ "
la Grange JMR အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီသိသာထင်ရှားသောကြောင့်လုံ့လဝီရိယကိုပြု၏။ Added Nitzan "အပြင်မျှော်မှန်းထားသည်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရ၏မြင့်ဒီဂရီကနေကျနော်တို့က high-ဝန် shared သိုလှောင်မှုပလီကေးရှင်းကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်စနစ်ကလိုချင်ခြင်းနှင့်အပိုဆောင်းသိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကိုအားသွင်းမထားဘူးတဲ့ software ကိုလိုင်စင်ရှိခြင်း။ ကျနော်တို့ Lacy, OWC, Synology ကြည့်ရှု, HGST နှင့် ExaGrid JMR နှင့်၎င်းတို့၏ BlueStor SHARE system ပေါ်တွင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမပြုမီ။ အဆိုပါ JMR စနစ်ကအစိုင်အခဲများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောကျောက်, အဆင့်မြင့်ရှိ၏ သူတို့ရဲ့ထောက်ခံမှုပုဂ္ဂိုလ်များအလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဖောက်သည်အာရုံစူးစိုက်; နှင့်စနစ်ရိုးရှင်းသော-to-install-and အသုံးပြုမှုဖြစ်ဖို့သက်သေပြခဲ့သည်။ အောက်ခြေလိုင်း - များကြောင့်လုပ်ငန်းအသွားအလာထိရောက်မှုနှင့်ငါတို့အဘို့ကြီးသောရွယ်အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များအတွက်တစ်ဦး Win-Win "။
T သူကစျေးသက်သာသော BlueStor SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ်ထမ်းဆောင်ဖိုင်, ဝန်-ဟန်ချက်ညီ shared သိမ်းဆည်းခြင်း, အမှားဒဏ်ခံအီးမေးလ် / web server သို့ / streaming မီဒီယာ, ဒစ်ဂျစ်တယ် A / V ကို (အသံ / ဗီဒီယို) လုပ်ငန်းအသွားအလာသိမ်းဆည်းခြင်း, HA စပျစ်သီးပြွတ်များအတွက်စံပြဖြစ်ပါတယ်စျေးနှုန်းနှင့်သိုလှောင်မှုပလီကေးရှင်းကို back up ။ တစ်ခုတည်းယူနစ်သို့ SAS RAID နဲ့ဖိုင်ဆာဗာကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုပေါင်းစပ်ပြီးအသုံးပြုပုံ SHARE မိုဃ်းတိမ်မှ, ဒါမှမဟုတ် virtualized နှင့် Cluster ပတ်ဝန်းကျင်မှာမှ applications များချဲ့ထွင်ရန်အသုံးပြုသူများအဖွင့်, ဆုံကွန်ရက်များအဘို့ရိုးရှင်းသော, ယုံကြည်စိတ်ချရသော, မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်သိုလှောင်မှုကယ်တင်တတ်၏။ အခြားသော Enterprise-လူတန်းစားဟာယပူဇော်သက္ကာထက်လျော့နည်းအထိငါးကြိမ်မှာစျေးနှုန်းကြောင့် data ကိုစွမ်းရည် 160TB မှမရရှိနိုင်တက်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောဦးခေါင်းယူနစ်နှင့်အတူ 1 PB ကျော်လွန်စကေးနိုင်ပါတယ်။ စတင်ချိန် မှစ. ပေးအပ်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်လိုင်စင်အဆင့်မြှင့်တင်ဘို့မလိုဘဲန့်အသတ်သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ခွင့်ပြုနှင့်တစ်ဦး3နှစ်အလုပ်သမားနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုအာမခံနှင့်တကွကြွလာ။
အေျကာင္းအရာ JMR အီလက်ထရောနစ်
JMR အပါအဝင်မျိုးစုံစျေးကွက်များအတွက်မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်မောင်းနှင် application များအတွက်အရွယ်မှာသိုလှောင်မှုစနစ်များကိုတစ်ဦးဦးဆောင်တန်ဖိုးကိုပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိ၏ ဗီဒီယိုနှင့် Post-ထုတ်လုပ်မှု, စစ်တပ်နှင့်အစိုးရ, ပညာရေး, VOD, DCC, ဂိမ်း, လုံခြုံရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပုံရိပ်, HPC နဲ့ Web 2.0 ။ 1982 ကတည်းက JMR ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ဆန်းသစ် RAID စနစ်များကိုဂုဏ်ယူစွာ၎င်းတို့၏ Chatsworth ကယ်လီဖိုးနီးယားအဆောက်အဦကနေလုံးဝထုတ်လုပ်သောအမေရိကန်အတွက်လုပ်နေကြသည်။ BlueStor ™တိမ်တိုက်-အဆင်သင့် rackmount နဲ့ Desktop ဖြေရှင်းချက်အရှိဆုံးတောင်းဆိုမှုများစီမံကိန်းကိုကိုင်တွယ်ရန်တည်ဆောက်ထားကြသည်၏ JMR ရဲ့ပြီးပြည့်စုံသောလိုင်းစားသုံးမိရာမှပေးပို့ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရ။ ဆန်းသစ်တီထွင်။ performance ။ ဤသည် JMR ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး www.jmr.com။ ဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်ခေါ်ဆိုခ [အီးမေးလျ protected] နှင့် 818-993-4801, Ext ။ 190 ။
အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ at ထုတ်လွှင့် Beat နှင့် AV စနစ်ဘိမဂ္ဂဇင်း
Curtis ချန်းသည်အဘယ်သူ၏ clients များမြို့တော်ရန်ပုံငွေစတင်စွမှကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Fortune မဂ္ဂဇင်း 500 ကနေအထိနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် CEO ဖြစ်သူ / တည်ထောင်သူနှင့်နှစ်ဦးကိုမြင့်မားတဲ့နည်းပညာအမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်နှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးကုမ္ပဏီများမှရဲ့ Managing Partner, Chan & Associates နှင့်သိမြင်မှုသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
မိမိအအေဂျင်စီများ '' န်ဆောင်မှုများ, လေးပုံတစ်ပုံရာစုကျော်ဘို့, ကျော် $ 2.0 ဘီလီယံစုစုပေါင်းအဘိုးပြတ်နှင့်အတူဝယ်ယူသို့မဟုတ် IPO ဖြစ်စေမှု, သိမ်းသွင်း ထား. အစောပိုင်းအဆင့်များနှင့်ကြီးထွားကုမ္ပဏီများသည်သိသာထင်ရှားသောအမှတ်တံဆိပ်ထိတွေ့မှုကကူညီပေးခဲ့ကြပါပြီ။
မစ္စတာချန်းဟာအမှတ်စဉ်လုပ်ငန်းရှင်, ပရဟိတ, စာရေးဆရာနဲ့ကောင်းကင်တမန်သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်ပါတယ်။ သူကရှေ့ဆောင်သို့ရှေးရှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဒီဂျစ်တယ်အသံနှင့်မှတ်တမ်းတင်ဘို့ဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုနည်းပညာများ, ထုတ်လွှင့်, ရုပ်ရှင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း post မှကူညီအစောပိုင်းအပေါ်သော့ချက်အလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နှင့်စျေးကွက်ဒေတာသိုလှောင်မှုနည်းပညာများကူညီအဓိကအလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ မိမိအကျယ်ပြန်နောက်ခံအစဉ်အဆက်စစ်ဆင်ရေးအတွက်အလုပ်အမှုဆောင်အခန်းကဏ္ဍတိုးမြှင့်လေးဆယ်စုနှစ်အထိချဲ့ကာသတင်းအချက်အလက်နည်းပညာ, မီဒီယာ & ဖျော်ဖြေရေး, သိုလှောင်မှုနဲ့ Networking အတွက်, စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု, အင်ဂျင်နီယာနှင့်အရောင်း / စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့်အခြားဆက်စပ်မြင့်မားတဲ့နည်းပညာကိုစက်မှုလုပ်ငန်း။
သူကတစ်ဦးတက်ကြွဆရာနှင့်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးအများအပြားမှအကြီးတန်းအကြံပေးနှင့် start-up ကုမ္ပဏီများ, စျေးကွက် / နည်းပညာလေ့လာဆန်းစစ်ဖြစ်ပြီး, အမှတ်တံဆိပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အတွေ့အကြုံ, စီမံခန့်ခွဲမှုအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ turnarounds, ဖန်တီးမှုကြော်ငြာနှင့်လူထုဆက်ဆံရေးဆယ်စုနှစ်သုံးခုရှိပါတယ်။
ကယ်လီဖိုးနီးယား Polytechnic ပြည်နယ်တက္ကသိုလ် (Cal Poly), စန်းလူး Obispo ၏တစ်ဦးကဘွဲ့ရ; မစ္စတာချန်းဟာဖူကောလိပ်ဖောင်ဒေးရှင်းနှင့်စီးပွားရေးအတွက်ထူးချွန်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် 12 သမ္မတဦးသိန်းစိန်ရဲ့ဆုကို၏လက်ခံရရှိသူအဘို့ဒါရိုက်တာတစ်ဘုတ်အဖွဲ့အဖြစ်သူ၏ 2017th တစ်နှစ်ကျင်းပလျက်ရှိ၏ တစ်ဦး In-Residence စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်နှင့်ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်ဖူလာနဲ့ပေါက်ဖွားမှာအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဌာန Institute များအတွက်ဆရာအဖြစ် 17th တစ်နှစ်။ ထို့အပြင်သူက DECA (မြစ်ဝကျွန်းပေါ် Epsilon Chi နှင့်အမေရိက၏ဖြန့်ဖြူးပညာရေးဒုတ်) ၏စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်၏ အဆိုပါဆန်းသစ်တီထွင်မှုများနှင့်စီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုသည်အင်ဂျင်နီယာ၏ Global စွန့်ပစ်သုတေသနအင်စတီကျုနှင့်စင်တာကောလိပ်, Cal Poly, စန်းလူး Obispo နှင့်နိုင်ငံတော်သမ္မတရဲ့အစိမ်းရောင်နှင့်ရွှေလူ့အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးမှတစ်ဦးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်။ ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးအသည်းအသန်သူဟာကုသမှု Heart Association များအတွက်အတိတ်ဘုတ်အဖွဲ့ကသမ္မတရှိ၏ နှင့်တိုင်းပြည်တစ်ဝှမ်းအများအပြား MBA ဘွဲ့ရများနှင့်ပါရဂူအဆင့်ပို့ချချက်မှာမှန်မှန် featured ပီဖြစ်ပါတယ်။ သူကတင်ပြခြင်းနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 30 စာတမ်းများကျော်ထုတ်ဝေခဲ့သည်, အသံလွှင့်များအတွက်စာအုပ် Co-စာရေးဆရာ, Motion Picture နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားအင်ဂျင်နီယာများ၏လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအယ်ဒီတာ့အာဘော်ဘုတ်အဖွဲ့အဖွဲ့ဝင်, အကြီးတန်းအယ်ဒီတာ Beat နှင့် AV စနစ်မဂ္ဂဇင်းများ Beat, ကွန်ပျူတာနည်းပညာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းများအတွက်အကြီးတန်းအယ်ဒီတာအတိတ်နှင့်သိရပါတယ် တစ်ဦးကိုမှန်မှန် 30 နှစ်ကျော်အဘို့များစွာသောအမေရိကန်နှင့်နိုင်ငံတကာကုန်သွယ်မှုပမြေားကိုမှအယ်ဒီတာပံ့ပိုး featured ဖြစ်ပါတယ်။
www.cognitiveimpact.com မှာသိမှုသက်ရောက်မှုန်ဆောင်မှုများရှုမြင်ကြသည်။ Curtis မှာရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် [အီးမေးလျ protected]; Office ကို: (714) 447-4993 သို့မဟုတ် [အီးမေးလျ protected]
Curtis ချန်းအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
la Grange Post ကို Facility အဘို့အ JMR SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင် Serveras ဗဟိုသိုလှောင်ရေး Hub ကိုရွေးကောက်ပြီး - ဇူလိုင်လ 17, 2019
သခွားသီး & Company ကို JMR SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင် Serverto ဗဟိုသိုလှောင်ရေးလိုအပ်ချက်များဝယ်ယူ - ဇူလိုင်လ 17, 2019
4K လုပ်ငန်းအသွားအလာ Shared သိုလှောင် Applications ကိုမှပူးပေါင်း HD ကိုများအတွက် JMR BlueStor SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာ - ဇူလိုင်လ 15, 2019
Aurora ကနျြးမာရေးကင်ပိန်း / ကိုလိုနီထောက်ခံ လွန်စွာလိုလားသော ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်-လူမှုမီဒီယာ ထုတ်လွှင့်-SocialMedia ထုတ်လွှင့်-SocialMeida အထောက်အပံ့ တည်းဖြတ်ခြင်း ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor SJGolden - SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ကိုလိုနီခေတ် ကိုလိုနီခေတ် - သတင်း ကိုလိုနီ / ချီကာဂို TVU ကွန်ယက် ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်	2019-07-17
+ Curtis ချန်း
ယခင်: သခွားသီး & Company ကိုသိုလှောင်ရေးလိုအပ်ချက်များစုရုံးဖို့ JMR SHARE ကွန်ယက်ကိုသိုလှောင်ဆာဗာဝယ်ယူ